သင့်လက်ထဲမှာ ပိုက်ဆံ တသောင်းခွဲ ရှိမှ စားလို့ရမယ့် ရွှေတောင်ကြားလမ်းက မုန့်ဟင်းခါးဆိုင်
Posted by သုတရသအဖွာဖွာ on August 13, 2019
ဒေါ်နှင်းဆီမုန့်ဟင်းခါး တစ်ပွဲ တစ်သောင်းခွဲ တဲ့ ….Oh my God၊ ကိုယ်လည်း စူးစမ်းချင်လို့သွားစားကြည့်တာ၊ မယုံလို့ အယ်..တကယ်ကြီးတော့်၊
ကိုယ်ကြားဖူးတာနဲ့ စာဖူးတာ က ထောင့်ငါးရာတန်လောက်က အများဆုံးကိုး… နီနီက ခဏ ခဏ ပြောပြတယ်.. အဲ့ဒီမုန့်ဟင်းခါးက ဘယ်လို ကောင်းကြောင်းပေါ့ သူသွားစားတိုင်း ပုံလှမ်းလှမ်းပို့ရတာ အမော..
အဲ့လိုအချိန်ဆိုရင် ဒါဒါ သူ့ကိုပြောတယ် နင့် မုန့်ဟင်းခါးက ဘာမလို့လဲ တစ်သောင်းခွဲပေးရအောင်…ငါသာဆို စားမနေဘူး မတန်မရာတွေ အံ့သြတယ် ဘာဖြစ်တယ် ညာဖြစ်တယ်ပေါ့..
နီနီကပြန်ပြောတယ် နင် ရန်ကုန်ရောက်မှ စားကြည့်လိုက် ပြီးမှဆက်ပြောတဲ့….Ok ပေါ့… ဒီနေ့ …ဒီမုန့်ဟင်းခါးကိုစားဖို့ မနက်ငါးနာရီထရပါတယ် (ငတ်ကြီးကျတယ်ဘဲပြောပြော တစ်သောင်းခွဲဆိုသော မုန့်ဟင်းခါးကို စိတ်ဝင်စားလို့ အစောထခြင်းပါ)
ဖုန်းဆက်ပြီး ဘယ်နှယောက်စာ ဆိုတာကြိုတင်မှာရပါ သေးတယ်… (ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် ဖုန်းဆက်မှာရသေးတယ်လို့ ထင်ကောင်းထင်နိုင်ပါတယ်) ကြိုက်သလိုထင်ပါ…
သူက မနက်ရှစ်နာရီကျော်လောက်ဆို ကုန်တတ်လို့ပါတဲ့… ဆိုင်အပြင် အဆင်ကလည်းပုံမှာမြင်တဲ့အတိုင်းပါဘဲ ရိုးရှင်းပါတယ်…လာစားတဲ့ ကားတွေကလည်း ကျိတ်ကျိတ်တိုးအပြည့်ဘဲမလို့ …..ကြိုမမှာထားရင် တန်းစီစောင့်ရပါတယ်… Feeling amazing ပေါ့နော်
အဲ့တာနဲ့ မုန့်ဟင်းခါး ပန်းကန်လာချတော့ ပန်းကန်က အလုံးမဟုတ်ဘူး.. ပန်းကန်ပြားနဲ့…စပြီးသတိထားမိတာက ငါးဥတွေ နဲ့ ငါးဖယ်တွေနဲ့ စုံပလုံ နေတာဘဲ၊ တစ်ဇွန်းစ စားကြည့်တယ် .. အင်း သူတို့ပြောတာမှန်တယ် ဆိုပြီးဖြစ်သွားရော တော်တော်လေး အရသာရှိပါတယ်
သာမန်မုန့်ဟင်းခါးတွေနဲ့ အတော်လေးလည်းကွဲထွက် ပြီး…ဘာကိုကောင်းတာလဲလို့ မေးရင် ကောင်းလို့ ကို ကောင်းတာပါလို့ဘဲ ပြန်ဖြေချင်ပါတယ်။
“တန်ရာတန်ကြေးပေးရင် ပေးရတာနဲ့တန်အောင် ပြန်ရမှ လူတွေက ကျေနပ်ကြတာ သဘာဝကိုး…” အော်. ဒီမုန့်ဟင်းခါး ကို ကိုယ်တိုင်လာမစားကြည့်ခင် ကတော့ အပြစ်မြင်ခဲ့ဖူးပါရဲ့…
အခုကျတော့ ကိုယ်အပါအဝင် လူတွေများစွာ စားပွဲပေါင်း များစွာ…ထိုင်ခုံပေါင်း များစွာ ဝိုင်းတွေက အပြည့်နဲ့လေ…..ပျော်စရာကြီးပါ…. မဆီမဆိုင် သူ့ဝင်ငွေတောင် ကိုယ်က ထိုင်တွက် ခန့်မှန်းခဲ့သေး…..
သူ့ကိုကြိုက်နှစ်သက်လို့လာရောက်အားပေးကြတာလေ ဝေးကလည်း ဝေးသေး.. တော်ရုံဆို ဘယ်လာကြမလဲ သူ့ရဲ့ကောင်းကွက်လေးတွေကို ချစ်ခင်နှစ်သက်စိတ်နဲ့ လက်ခံလို့ပေါ့။
အဲ့လိုဘဲ…အခြားတစ်ဖက်မှာ သူ့ကိုလက်မခံချင်တဲ့ မတန်မရာ ဘာညာ သာရကာ ဆိုတဲ့ လူတွေလည်းရှိကောင်းရှိမှာ ဘဲ….သူက တစ်သောင်းခွဲနဲ့ရောင်းနေပေမယ့် တစ်သောင်းခွဲပေးပြီး ကျေကျေနပ်နပ်နဲ့ ဝယ်စားတဲ့လူတွေရှိမှရတာကိုး သူ့ကို လက်ခံနိုင်တဲ့ သူရှိသလို လက်မခံချင်တဲ့သူလည်း ရှိမှာဘဲ…
သူကတော့ ဘာကိုမှဂရုမစိုက်အားပါဘူး ရောင်း ကောင်းတာ လက်မလည်လို့ပါ အော်….. အဲ့တာပြောတာပေါ့ နေရာတိုင်းမှာ သူ့အနေအထားနဲ့သူ သူ့တန်ဖိုးနဲ့သူ.. စိတ်ဝင်စားရင် သွားစားလို့ရအောင် လိပ်စာလေး ရေးပေးခဲ့မယ် ရွှေတောင်ကြားလမ်း အလက(၆)ကျောင်းဝင်းအတွင်း မုန့်ဟင်းခါးစားရင်း ရလိုက်တဲ့ မုန့်ဟင်းခါး Messages
Myo Thandar Htwe